Taariikhda Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur – Kalfadhi
Taariikhda Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur
Xildhibaan Cilmi Maxamuud
Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ku dhashay magaalada Boorama ee gobolka Awdal sanadkii 1966 wuxuu ka mid yahay mudaneyaasha baarlamaanka 10-aad ee federaalka ah ee Soomaaliya.
Mas’uulkan oo ku cusub Golaha Shacabka, doorashada uu ku soo baxay, kuna matalay Boorama waxay bishii Diseembar ee 2016 ka dhacday magaalada Muqdisho. Waa markii ugu horreysay siyaasadda. Wuxuu horay u soo noqday bare, maamule iyo la-taliye la soo shaqeeyay jaamacado iyo hay’ado caalami ah.
Waddan jaceylka iyo dareenka ah inay jirto mas’uuliyad ka saaran dalka ayaa ku dhalisay inuu xilkan qabto. Xildhibaan Cilmi oo bartay dhaqaalaha wuxuu aaminsan yahay shaqada uu hadda hayo inay Soomaaliya u horseedi doonto jihada saxda ah iyo horumarka. Himiladiisa siyaasadeed waa inuu arko Soomaaliya oo nabad iyo dimuqraaddi ah oo laga ixtiraamo adduunka intiisa kale.
Dugsiga hoose-dhexe waxa uu ku qaatay iskuulka Xaawo Taako ee Boorama, halka sare uu uga baxay Dugsiga Beeraha ee Afgooye. School of Economics oo ku yaala magaalada Islamabad ee dalka Bakistaan ayuu ka qaatay daraja koowaad iyo tan labaad ee jaamacadda (Bachelor iyo Master). PhD ayuu sanadkii 2005 ku diyaariyay dalka Sweden.
Guddiyada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad
Xildhibaanad Naciima Maxamed Gacal